भैरहवा सेज र कुलमानको जुहारीः बिजुली पहिले कि सब-स्टेसन ?
८ श्रावण २०७६, बुधवार | Jul 24, 2019 | 06:59:24
By radiojanakpur on	 January 21, 2018 देश
७ पुस, काठमाडौं । स्थापना भएको लामो समय भइसक्दा पनि भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योगहरु सञ्चालनमा किन आएनन् ? सेजको कार्यालय र उद्योगीले आरोप लगाईरहेका छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली नै दिएन ।
तर, सेजले पनि बिजुली पुगेपछि वितरणका लागि तयार गर्नुपर्ने सब-स्टेशनका लागि टेण्डर नै गरेको छैन । यसका कारण तत्कालै बिजुली पुगेपनि वितरण गर्न कठीन हुने अवस्था छ ।
प्राधिकरणले पनि प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्रमा रुख कटानको विवाद सुल्झाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले बिजुली नपुगेकै कारण उद्योग नचलेको भन्ने सेज र उद्योगीको आरोपको खण्डन गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जनप्रतिनिधिमार्फत विवादहरु सुल्झाएर ३ महिनाभित्रै सेजमा बिजुली पुर्‍याउन लागिएको बताउँछन् । बिजुली ३ महिनाभित्रै पुगेपनि सेजले सब-स्टेन निर्माण नथाल्दा त्यसले महत्व नपाउने तर्क घिसिङको छ । यसले गर्दा सेजसम्म विद्युत पुगेपनि उद्योगहरुले त्यसबाट लाभ लिन नसक्ने देखिएको प्राधिकरणको दावी छ ।
तर, सेज भने सब-स्टेशन विना नै अहिले बिजुली दिन सकिने तर्क गरिरहेको छ । भैरहवा सेजका कार्यालय प्रमुख सागर सिलवाल सब-स्टेश निर्माण गर्न अब ९ महिना लाग्ने बताउँछन् । प्राधिकरणले अहिले भनेजस्तो तत्कालै बिजुली दिन नसक्ने उनको दावी छ ।
सेजले बिजुली वितरणका लागि सबस्टेशन आफैंले बनाउनुपर्छ । तर, त्यसका लागि टेण्डर नगरेका कारण उक्त क्षेत्रमा स्थापना हुन लागेका उद्योगहरुले अझै दुई वर्षसम्म विद्युत नपाउने सम्भावना उच्च छ ।
सब-स्टेशन नबनाई आफूमाथि दोष खन्याएर सेजका जिम्मेवार अधिकारी र उद्योगीहरु उम्किन खोजेको भन्दै प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको छ । सेजसम्म चैत्रभित्रमा विद्युत पर्‍याउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको दावी छ ।
सेजले त्यहाँ ३३/११ केभीको सव स्टेसन (१० एमभीए) निर्माण गर्नुपर्ने छ । सेजका प्रमुख भने ३ महिनाभित्र प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माण गर्नै नसक्ने भएकाले सब-स्टेशन बनाउन पनि ढिलाइ गरिएको स्वीकार्छन् ।
‘प्राधिकरणले वर्षौंदेखि बिजुली ल्याउँछु भनेको हो । तर, प्रगतिनगर सामुदायिक वनमा विवाद छ,’ प्रमुख सिलवालले भन्छन्,’बाटो नबनाई किन पुल बनाउने भनेर हामीले सब-स्टेशन निर्माणमा ढिलाइ गरेका हौं ।’
प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र सेजसम्म विद्युत पुर्‍याउनका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने मात्रै हो । त्यसपछि सव स्टेसन बनाएर उद्योगलाई विद्युत वितरण गर्ने काम भैरहवा सेजको स्कोपभित्र पर्छ ।
भैरहवा सेजले त्यहाँ सब-स्टेसन बनाउने र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगलाई विद्युत् दिने छ । प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको सव-स्टेसनको अनुभव हेर्दा टेण्डर गरी ठेकेदार नियुक्त गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि सामान अडर गरी ठेकेदारलाई काम सक्ने छिटोमा १५ देखि १८ महिना लाग्छ ।
अर्थात सामान्य अवस्थामा टेण्डरका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको अनुभव छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणलाई दोषी देखाएर सेज व्यवस्थापन आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेको बताएका छन् ।
‘त्यहाँ खोलिने उद्योगका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत दिइसकेका छौं, त्यसैले निर्माणका काम गर्न कुनै समस्या छैन’, उनले भने,’ चैत्रभित्रमा हाम्रो स्कोपभित्रको प्रसारण लाइन बनाएर त्यहाँ विद्युत् पुर्याउँछौं सेज व्यवस्थापनले सव स्टेसन बनाउन काम चै नगर्ने अनि विद्युत जोडिएको छैन भन्दै हामीलाई दोष देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने?’
अहिलेसम्म भैरहवा सेजमा १९ वटा उद्योगले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । तर, एउटैले पनि निर्माण थालेका छैनन् ।